ससफो नेपाल समाजवादी, लोकतान्त्रिक तथा प्रगतिशील शक्तिहरूको केन्द्र हो : सहअध्यक्ष श्रेष्ठ
काठमाडौँ, १३ माघ । संघीीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले ससफो नेपाल देशको समाजवादी, लोकतान्त्रिक तथा प्रगतिशील शक्ति भएको बताएका छन् ।
दलित भनेर सम्बोधन नगर्नुस् : प्रदेश प्रमुख कायस्थ
ब्रम्हानन्द ठाकुर, जनकपुरधाम, ११ माघ । प्रदेश नं. २ का प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले समाजमा रहेका कमी कमजोरीलाई पहिल्याउँदै अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
आउने चुनावमा कांग्रेस पुनः पहिलो पार्टी हुने : डा.कोइराला
जनकपुरधाम, ८ माघ । नेपाली कांगे्रसका महामन्त्री डा शशाङ्क कोइरालाले आउने चुनावमा कांग्रेस पुनः पहिलो पार्टी हुने दाबी गरेका छन् ।
नयाँ शक्तिका नेताहरुले भेटे भारतीय नेता
काठमाडौं, ७ माघ । नया शक्ति पार्टीको प्रचार विभागको टोली नयाँदिल्ली पुगेर भारतका सबै प्रमुख पार्टीको प्रचार अभियान सम्बन्धी अनुभव आदान–प्रदान गरेको छ ।
संघीय फोरममा कम्युनिष्ट केन्द्र समाहित
काठमाडौं, ७ माघ । संघीय समाजवादी फोरम नेपालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी–कम्युनिष्ट केन्द्र) समाहित भएको छ ।
उर्जाशील युवाशक्तिलाई खाडीमा पठाएर समाजवाद आउँदैन : सहअध्यक्ष श्रेष्ठ
चितवन, ७ माघ । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले युवा जनशक्तिलाई खाडीमा पठाएर समाजवाद नआउने जिकीर गरेका छन् ।
मधेशी आयोगको अध्यक्षमा डा.दत्त सिफारिस
काठमाडौं, ६ माघ । संवैधानिक परिषद्ले मधेशी आयोगको अध्यक्षमा डा.विजयकुमार दत्तलाई सिफारिस गरेको छ ।
संविधान संशोधनका लागि जनसंग्रहको विकल्प छैन : सांसद गिरी
काठमाडौं, ६ माघ । सत्तारुढ दल संघीय समाजवादी फोरम नेपालकी प्रतिनिधिसभा सदस्य सरिता गिरीले संविधान संशोधनका लागि जनमत संग्रहको विकल्प नरहेको बताएकी छन् ।
बलिदानीकै कारण मधेशीको अधिकार स्थापित भयो : मुख्यमन्त्री राउत
लहान, ५ माघ । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मो.लालबाबु राउत गद्दीले शहीदको बलिदानीकै कारण आज प्रदेश नं. २मा मधेशी जनताको सरकार स्थापित भएको बताएका छन् ।
मधेशीको बलिदानीकै कारण मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र : उपप्रधानमन्त्री यादव
सिरहा, ५ माघ । उप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले मधेशी जनताले गरेको बलिदानीकै कारण मुलुक अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएको र मधेशीहरु मुलुकमा मात्र नभई विश्वभरिमै आफनो पहिचान स्थापित गरेको बताएका छन् ।
सरकार विकास र समृद्धि ल्याउने लक्ष्यमा अडिग : प्रम ओली
काठमाडौं, ५ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार विकास समृद्धि ल्याउने लक्ष्यमा अडिग रहेको बताएका छन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेताद्वारा सरकारी गाडि फिर्ता
रुपन्देही, ५ माघ । प्रदेश नम्बर ५ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता बलदेब शर्मा पोखरेलले आफुले चढ्दै आएको गाडी फिर्ता गरेका छन्।
राजपाद्वारा “मधेशी शहीद कल्याण कोष” स्थापना, महेन्द्रलाई संयोजकको जिम्मेवारी
काठमाडौं, ५ माघ । राजेन्द्र महतो संयोजकत्वमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको अध्यक्षमण्डलको अन्तिम बैठकले “मधेशी शहीद कल्याण कोष” स्थापना गरेको छ ।
शहीदको सपना साकार बनाउन राष्ट्रिय आन्दोलन आवश्यक : संयोजक महतो
काठमाडौं, ५ माघ । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले मधेश आन्दोलनका शहीदहरुको सम्झनामा बलिदानी दिवस मनाएको छ ।
मधेश आन्दोलनको १२ वर्ष पूरा : उपलब्धिका लागि अब कति कुर्ने ?
काठमाडौं, ५ माघ । पहिलो मधेश आन्दोलन भएको माघ ५ गते १२ वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिका मधेश आन्दोलनको विषयमा धेरै बहस र समीक्षा भए तर उपलब्धि केही प्राप्त हुन सकेको छैन ।
डा.केसीका मागबारे एकजुट हुन विवेकशील साझाको आह्वान
काठमाडौं, ४ माघ । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका तमाम विकृतीहरुको विरुद्धमा लड्दै आएका सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीको मागबारे एकजुट हुन विवेकशील साझा पार्टीले आह्वान गरेको छ ।
राजपाले मधेश भवनमा ‘बलिदानी दिवस’ मनाउने
काठमाडौं, ४ माघ । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले मधेशी शहीदरहरुको सम्झनामा माघ ५ अर्थात् बलिदानी दिवस मनाउने भएको छ ।
फोरमलाई प्रधानमन्त्रीले भने, ‘आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संविधान संशोधन हुन्छ’
काठमाडौं, ४ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संविधान संशोधन हुने जवाफ दिएका छन् ।
राजपाको संयोजक अब महेन्द्र !
काठमाडौं, ४ माघ । संयोजकबाट महन्थ ठाकुरबाट हटाइएको विवाद नसुल्झदै राजपाभित्र नयाँ संयोजक तोक्ने प्रक्रिया सुरू भएको छ ।
प्रदेश ५ को नाम ‘लुम्बिनी’ राख्न माग
रुपन्देही, ४ माघ । प्रदेशको नाम र स्थायी तोक्न माग गर्दे नेपाली कांग्रेसले बुटवलमा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ । नेताहरुले प्रदेश नं ५को नाम लुम्बिनी राख्नु पर्ने भन्दै यसमा बिबाद गर्न नहुने बताएका छन् ।
विदेशमा कालो धन जम्मा गर्नेलाई कारवाहीको माग
काठमाडौं, ३ माघ । मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गइरहेको अवस्थामा अवैध तरिकाबाट देश बाहिर कालो धन जम्मा गर्नेलाई कारवाही गर्न विवेकशील साझा पार्टीले माग गरेको छ ।
चोभारमा सुख्खा बन्दरगाहको शिलान्यास
काठमाडौं, ३ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कीर्तिपुर नगरपालिका स्थित चोभारमा सुख्खा बन्दरगाहाको शिलान्यास गरेका छन् ।
मन्त्रीबाट सचिवमाथिको आक्रमण संघीयता नै समाप्त गर्ने षडयन्त्र : नेता जोशी
जनकपुरधाम, २ माघ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नविन्द्रराज जोशीले प्रदेश नं. २ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव माथिको आक्रमण लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत रहेको बताएका छन् ।
प्रदेश २ का निजामती कर्मचारीहरु आन्दोलित, हातमा कालोपट्टि बाँधी पेनडाउन गर्ने
जनकपुरधाम, २ माघ । प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवमाथि कुटपिट गरेको विरोधमा निजामती कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन् ।
विवेकशील साझाले २०७६ फागुनमा पहिलो महाधिवेशन गर्ने
काठमाडौं, २ माघ । विवेकशील साझा पार्टीले २०७६ साल फागुन १५ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौँमा पहिलो महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।